Hita nihosin-dra teo amin’ny arabe: maty voatsatoka antsy ny maître Bary - ewa.mg
News - Hita nihosin-dra teo amin’ny arabe: maty voatsatoka antsy ny maître Bary
Nandriaka indray ny ra teny
Ankaraobato, omaly maraina. Hitan’ny fokonolona nihosin-dra
tanteraka ny maitre Bary, nivalampatra tamin’ny arabe. Olona sendra
nandalo ny nahita azy teo amin’ny
rarivaton’Ankadilalampotsy-Ankaraobato. Feno dian’antsy ny faritry
ny tendan-dRatompokolahy Bary. “Antony mety ho nitarika ny
fahafatesany”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Nambarany
fa monina eny Antsahasoa, tsy lavitra eny, ralehilahy. Mpitaiza
tanora amin’ny fanatanjahantena izy. Anarana ahalalan’ny maro azy
ny “maitre Bary”. Malaza amin’ny tanjany izy ary tsy mahatohitra
azy raha mbola olona telo aman’efatra manao angaredona aminy. Mety
ho tampoka aminy kosa ny fanafihana nahazo azy.
Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminanan nijery ilay namoy
ny ainy. Nanatrika izany koa ny mpitsabo ao an-toerana. Misokatra,
manaraka izany, koa ny fanadihadiana ny raharaha.
L’article Hita nihosin-dra teo amin’ny arabe: maty voatsatoka antsy ny maître Bary a été récupéré chez Newsmada.
FAMBOLEN-KAZO MAHARITRA : Hahazo tombony ireo tantsaha eny Andramasina
Zana-kazo 25.000 no hambolena amin’ny tany mirefy 24 ha eny Andramasina ao anatin’ny dimy taona. Io no vina napetraky ny Fondation Axian ho fandraisana anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Niaraka namboly hazo teny Andramasina ireo mpiara-miasa 150, mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ireo orinasa mivondrona ao amin’ny Group Axian ny 07 desambra 2020. Zana-kazo 2.500 no voavoly nandritra ny tontolo andro. Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny serasera ao amin’ny Fondation, Rajemison Dina fa ao anatin’ny fiarahamiasan’ny Fondation Axian amin’ny orinasa Bôndy amin’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa fambolen-kazo maharitra ity hetsika ity. Mampiavaka ny tetikasa ny fampandraisana anjara ny olona eny ifotony. Tantsaha 30 no miara-miasa amin’ny Bôndy ka eny amin’ny tanin’izy ireo no hambolena izy zana-kazo. Nosafidiana manokana ireo hazo miaro tontolo iainana sy misy fiantraikany mivantana fiainana andavanandron’ny mponina. Karazan-kazo 17 isa toy ny hazo fihinam-boa (paiso, paoma), hazo fatao kitay na saribao, hazo sy voly mampidi-bola (Ravintsara, episy…) no nosafidiana. Hiteraka asa ihany koa ny tetikasa toy ny « pépiniériste »… Nirina R. Cet article FAMBOLEN-KAZO MAHARITRA : Hahazo tombony ireo tantsaha eny Andramasina est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FAMBOLEN-KAZO MAHARITRA : Hahazo tombony ireo tantsaha eny Andramasina a été récupéré chez Délire Madagascar.
Ho hita eo izay tsy manara-dalàna: hasiana GPS ny taxi-be zotra D
Nanomboka ny volana avrily lasa teo, nosafidina ho zotra filamatra hitondrana fanatsarana amin’ny fitateram-bahoaka ny zotra D mampitohy an’Antananarivo amin’Ivato sy Ambohidratrimo. Hetsika iarahan’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) sy ny minisiteran’ny Fitaterana ary ny kaoperativa miampy ny polisy ny fanatsarana.Maro ny asa efa notanterahina ka anisany ny fanofanana ireo tompon’ny fiara miasa ao anatin’ny kaoperativa, ny « pointeur », ny « cadenceur ». Efa mijoro ny komity manara-maso ny bokin’andraikitra sy ny fanatanterahana izay rehetra voalaza ao. Manana anjara andraikitra koa ny mpandeha mampiasa ny zotra isan’andro. Efa napetraka ho hitan’ny besinimaro any anatin’ny taxi-be ho an’ny zotra D ny laharana rehetra ilaina sy azo antsoina raha mahita zavatra tsy ara-dalàna, indrindra ny tsy fanajana ny bokin’andraikitra ny mpamily sy ny mpanampy azy. Tokony tsy hatahotra hampita vaovao ny mpandeha, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny ATT, ny kolonely Reribake Jeannot, raha nidina ifotony nanomboka ny fanaraha-maso ireo zotra D, omaly tetsy Vassacos.Manana fiara 750 miasa ao aminy ny zotra D mihazo an’Ivato sy Alakamisy Ambohidratrimo ary miparitaka amin’ny kaoperativa telo izy ireo. Tamin’ireo fiara 200 nandalo vao maraina teny Vassacos, ho an’ny 95% nandalo teo ambany mason’ireo tomponandraikitra, efa voapetaka avokoa ny afisy rehetra any anaty fiara. Misy ihany anefa ny zavatra tokony hahitsy. Hotontosaina indray mandeha isan-kerinandro ny fanaraha-maso toy izao.Hametrahana GPS ny fiara rehetraEntanina ihany koa ireo tompon’ny fiara hametraka GPS ao anatin’ny telo volana ho avy hahafahana manara-maso ireo fiara miasa sy mihodina an-dalana. Heverina fa tsy hampijaly vahoaka intsony ny fiara amin’ny zotra D ary hosazina avy hatrany izay mbola tratra tsy manaraka ny bokin’andraikitra, araka ny nambaran’ny filohan’ny koperativa, Rabarison Tina. Mila averina ihany koa ny tapakila izay porofo manamarina ny isan’ny mpandeha tao anatin’ny fiara nandritra ny tontolo andro ho fanatsarana ny fitantanana.Vonjy A. L’article Ho hita eo izay tsy manara-dalàna: hasiana GPS ny taxi-be zotra D a été récupéré chez Newsmada.
Mpandraharahan’ny minisiteran’ny Fahasalamana (Synpa): «Tokony hisitraka fampitaovana sy fiofanana»
Mahatsiaro ho mijaly ny mpiasa mpandraharaha ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ka mihetsika mitaky ny zo aman-kasiny. 7 000 ny mpiasan’ny fahasalamana misahana ny fandraharahana manerana ny Nosy raha manodidina ny 18 000 ny fitambaran’ny olona rehetra misehatra ao anatin’ny minisitera, araka ny fanazavan’ny filohan’ny sendikàn’ny mpiasa mpandraharaha ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana (Synpa), Rajernerson Modeste, omaly teny Anosy. Ny volana mey 2019 no nijoro ny sendikà hanatsara ny lafiny sosialy sy ny toekaren’ny mpikambana ao aminy ary hiaro ny mpiasa manoloana ny antsojay mety hahazo azy eo am-panatanterahana ny asany. Mahatsapa ny mpiasa mpandraharaha fa latsa-danja raha mitaha amin’ny mpiasam-panjakana namany na mitovy aza ny mari-pahazaina ananana. Izay no mahatonga azy ireo nametraka volavolan-dalàna eny anivon’ny tomponandraikitra hojerena manokana momba ny «indemnité» telo : fitaterana, «sujétion» ary ny «risque». Mangataka ny fanomezan-danja ny asan’ny mpandraharaha izy ireo ka tokony hisitraka fampiofanana sy ny fampitaovana satria mampihodina ny asam-pahasalamana koa na tsy misehatra mivantana eny amin’ny hopitaly aza.Nandritra ny hamehana ara-pahasalamana niantsoana ny mpiasan’ny fahasalamana rehetra hiasa hiady amin’ny valanaretina, nandray anjara avokoa ny mpiasa mpandraharaha ary mahatsapa fa rariny raha mangataka koa «indemnité de réquisition» toy ny mpiasan’ny fahasalamana.Nanao fivoriambe eto Antananarivo ny solontenan’ny sendikà isam-paritra ka nahatonga solontena ny faritra 20. Manombana ny ezaka vita sy ny asa miandry ho an’ny taona 2021 izy ireo.Vonjy A.L’article Mpandraharahan’ny minisiteran’ny Fahasalamana (Synpa): «Tokony hisitraka fampitaovana sy fiofanana» a été récupéré chez Newsmada.
LOZA TENY AN’ARABE :: Lehilahy roa samy namoy ny ainy voadonan’ny fiara
Samy maty tsy tra-drano voadonan’ ny fiara ny lehilahy roa niampita arabe teny Ankadimbahoaka sy Andohantapenaka, ny alin’ny alahady hifoha omaly alatsinainy. Efa eo am-pelantanan’ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana. Voatazona atao andrimaso ny mpamily roa nitondra ny fiara tamin’ireo tranga roa niseho ireo. Raha tsy misy ny fiovana dia, anio, no fantatra fa hanolorana ny valin’ny fanadihadiana eny amin’ny mpitsara mpanao famotorana eo anivon’ny Fampanoavana. Tokony ho tamin’ny valo ora sy sasany ny alin’ ny alahady, no niseho ny loza voalohany teny Ankadimbahoaka. Handeha hanapaka ny arabe no tra-doza tampoka ny lehilahy, roa amby telopolo taona. Fiara ana orinasa iray no nandona azy. «Henonay ho tsy niera tamin’ny lehibeny fa nangala-dia nitondra an’io fiara io an-tsokosoko ny mpamily. Hita ihany koa fa nisotro zava-pisotro misy alikaola izy no izao nanao loza izao », hoy ny polisy eo anivon’ny borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), manao ny famotorana. Mbola feno olona teo amin’ny manodidina, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza. Tonga teo ihany koa ny mpitandro ny filaminana nanao ny fizahana sy nitondra ny mpamily. Tamin’ny roa ambin’ ny folo alina tany ho any indray no nitrangan’ilay lozam-piarakodia faharoa teny Andohantapenaka. Fiara iray marika «Mercedes Sprinter » izay taksiborosy no voalaza fa nandona lehilahy iray, roa amby efapolo taona, ary nahafaty an’ity farany teo no ho eo. Nikasa hiditra ao amin’ny toby fiantsonan’ ny taksiborosy ilay fiara mpitatitra olona, tamin’io fotoana io. Mbola ny polisin’ny Bac hatrany no nantsoina hijery akaiky ny zava-misy teny an-toerana. Samy naterina teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Hjra ireo vatana mangatsiaka roa. Nambaran’ny loharanom-baovao akaiky ny famotorana fa andrasana ny fahatongavan’ny fianakaviana roa tonta tamin’ireo loza roa niseho ireo, mialoha ny hanolorana ny raharaha eny amin’ny Fitsarana. Miafara amin’ny fitohizan’ ny fitazonana an’ireo voarohirohy kosa raha toa ka tsy vita ny fanadihadiana rehetra. L’article LOZA TENY AN’ARABE :: Lehilahy roa samy namoy ny ainy voadonan’ny fiara est apparu en premier sur AoRaha.
Fandaharanasa Fanoitra: mampivoatra ny asa tanana amin’ny faritra Analamanga
Distrikan’Avaradrano, faritra Analamanga, distrika iray anatin’ny dimy ahitana ny Fandaharanasa Fanoitra, tohanan’ny Prosperer, ho fampivoarana ny tetikasa madinika eo amin’ny sehatry ny asa tanana. Efa nanomboka ny taona 2009 ary mitohy hatramin’izao.Maro ireo tohana nomena ireo orinasa madinika mihodina amin’ny rary, ny rafitra hazo sy ny zaitra. Isan’ireny ny fanofanana amin’ny endriny maro, ny fanamorana mahakasika ny findramam-bola, ny fanomezana fitaovana amin’ny vidiny ifampizarana, ny famonjena fampisehoana ara-barotra samihafa, indrindra ny fampiraisana ara-barotra ireo mpandraharaha amin’ny vondron’ny mpamokatra. Anatin’izany Fanoitra izany koa ny tetikasa momba ny fambolena sy ny fiompiana hita amin’ny faritra maro. Tanjona ny hampivoarana ny orinasa madinika.Ao Tsarafara, Sabotsy Namehana, ohatra, ahitana asa tanana rehetra vita amin’ny hoditra toy ny kitapom-behivavy, ny kitapon-dehilahy, ny kiraro, sns, ary koa ny asa tanana rehetra vita amin’ny rofia, toy ny harona. Tany taona 80 efa nahitana izany vokatry ny asa tanana izany teny an-toerana, ary nanomboka ny fiaraha-miasa amin’ny fandaharanasa Fanoitra, ny taona 2017.Ahitana mpandrafitra hazo ny ao Andrefantsena, Sabotsy Namehana ihany. Hita ao avokoa izay vita amin’ny hazo, toy ny fandriana, ny varavarana, ny fanaka, sy ny sisa. Fomba iray hisarihan’ireo mpandrafitra ny mpanjifa ny famoronana maodely vaovao, ankoatra ny fiofanana omena azy ireo.Na misy traikefa aza ireo mpanao asa tanana, nomena fiofanana ihany izy ireo ahafahany mampivoatra ny asany. Koa hita mihatsara hatrany ireo zava-bita ary miezaka mamorona maodely vaovao, araka izay azo atao izy ireo na betsaka aza ireo maka tahaka ny maodely efa navoaka.Toeram-pivarotana ao AntsofinondryRaha ny mahakasika ny lalam-barotra indray, ao Antsofinondry, Sabotsy Namehana, ny toeram-pivarotana iray ahitana ireo asa tanana vita amin’ny hoditra, ny rafitra hazo, ny zaitra, ny rary. Misahana ny varotra ny Kaoperativa Salohy. Manampy betsaka ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana mivantana koa ny famonjena foara, hahitan’ny mpitsidika ny entana amidy. Maka santionany 50, ohatra, amin’ny voalohany, avy eo maka maromaro saingy mbola tsy tena hoe betsaka. Mahavelona ny asa tanana raha toa ka manara-dalàna ireo mpifaninana. Misy amin’ireo mpifaninana mantsy no miditra amin’ny tsy ara-dalàna amin’ny endriny maro. R.MathieuL’article Fandaharanasa Fanoitra: mampivoatra ny asa tanana amin’ny faritra Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19 : Panique à l’Université d’Ankatso
La panique est à son comble. C’est ce que ressentent actuellement les étudiants face à la propagation du coronavirus dans les cités universitaires et au campus de l’Université d’Antananarivo. Des étudiants issus de l’École supérieure des sciences agronomiques et de la Faculté des Sciences seraient dans la liste des étudiants testés positifs mais aucune information officielle n’a été communiquée sur le sujet. Les étudiants s’inquiètent ainsi de leur sort car l’année universitaire 2019-2020 n’a débuté qu’au mois de novembre mais un éventuel confinement risquerait de perturber encore une fois le calendrier en cours. Bien que les responsables aient déjà procédé à la désinfection des lieux, le risque de contamination est à son maximum. Faute d’infrastructures, le respect des gestes barrières comme la distanciation sociale dans les salles de cours est quasi-impossible. Malgré ces vives inquiétudes et la multiplication des cas, la suspension des cours pédagogiques n’est pas encore envisagée par les responsables, du moins pour le moment. Narindra Rakotobe L’article Covid-19 : Panique à l’Université d’Ankatso est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Covid-19 : Panique à l’Université d’Ankatso a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Coronavirus eny amin’ny oniversite: efa nahitana tranga eny Ankatso II sy Ambolokandrina
Manao ny ezaka tsy hiparitahan’ny valanaretina Covd-19 ny tomponandraikitry ny oniversite. Ankoatra ny fandrarahana fanafody, hosokafana koa ny toeram-pandraisana ireo tsy salama eny Ambolokandrina.Azo ambara fa nahomby ny ezaka nataon’ny tomponandraikitra isan-tsokajiny ka tsy niitatra ny tranga Coronavirus teny amin’ny oniversiten’Antananarivo, hoy ny talen’ny CrouA, Rasolomandimby Mahefa, omaly. Hatramin’izao, 33 amin’ny fitiliana 44 no voalaza fa mitondra ny tsimokaretina ka ny 11 amin’ireo efa voamarina. Iray teny amin’ny sekoly ambony momba ny fambolena sy ny fiompiana (Agronomie), 10 eny amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra eny Ambolokandrina. Tsy mbola voamarina kosa ny tranga 22 ambiny ary tafidfitra ao ny efatra ahina ao amin’ny MISA (mathématika). Ao Ankatso II koa misy mpirahavavy nifampikasoka tamin’ny olona voatily fa marary ary efa nantsoina hanatona eny amin’ny médecine préventive hozahana fahasalamana sy hotilina. Hametrahana toeram-pitiliana hosahanin’ny mpitsabo avy ao amin’ny CrouA eny Ambolokandrina satria efa nahitana tranga miabo.Eny amin’ny barrière fidirana eo amin’ny oniversite no ahitana ny service médico-social misy ny toeram-pitiliana ireo rehetra mila izany ary natoby ao amin’ny Médecine préventive kosa ny fanafody toy ny zinc, paramétamol sy ny CVO 13 gony… ilaina amin’ny fandraisana an-tanana ireo tsy salama rehetra. Hitohy amin’ity herinandro ity ny fandrarahana fanafody eny amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra eny Ambatomaro sy Ambolokandrina. Nanentana ny mpianatra ho tony ny talen’ny CrouA sy hanatona ny médecine preventive, raha misy mampiahiahy amin’ny fahasalamana.Vonjy A.L’article Coronavirus eny amin’ny oniversite: efa nahitana tranga eny Ankatso II sy Ambolokandrina a été récupéré chez Newsmada.
Fanampiana ny any atsimo: naneho firaisankina ny Frenchtown avy any Frantsa
Tontosa ny asabotsy 23 janoary teo ny fampisehoana nataon’ny tarika Frenchtown avy any Frantsa, nanomboka tamin’ny 8 ora alina. Naharitra teo amin’ny adiny iray sy sasany teo izany, notanterahina teo amin’ny pejy facebook-n’ny ONG Vahatra, ny Frenchtown music, sombiniaina fotsiny/SCC. Ho firaisam-po sy fanohanana ireo havana tratran’ny tsy fanjariantsakafo sy ny Kere any atsimon’ny Nosy ny anton’ity hetsika ity.Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny ONG Vahatra sy ny tarika, nampitondraina ny lohahevitra hoe “Izay tia mahafoy- kere” izany. “Ndao hiara-hientana hiady amin’ny hanoanana ao amin’ny Nosy Madagascar , vonjeo ny aina”. Efa maro ny hetsika nokarakarain’ity fikambanana ity hoenti-manampy ireo mpiray tanindrazana any ampitan-dranomasina, ao anatin’izany ny hetsika tsipaipaika hanangonana izay foy eny an-dalana rehetra eny. Eo koa ny hetsika fifaninana manao rap slam, izay mifototra amin’ny lohahevitra famonjena ireo any atsimo, indrindra ny “zara fitia, zara tsiky” , izay hetsika tantara an-tsangana sy poezia notanterahina tao Bel’air Ampandrana, ny 30 desambra 2020 lasa teo. Mitohy hatrany ny hetsika sy ny fiaraha-miasa ataon’ny ONG Vahatra eo amin’ny fifanampiana sy famolavolana ny olona amin’ny sehatry ny kolontsaina sy ny famokarana. NarilalaL’article Fanampiana ny any atsimo: naneho firaisankina ny Frenchtown avy any Frantsa a été récupéré chez Newsmada.
FAPBM : nirongatra ny fanimbana ala ny taona 2020
Namoaka tatitra ny Fikambanana ho an’ny tontolo mananaina sy ny faritra aro­vana eto Madagasikara (FAPBM). Nirongatra ny fa­na­potehana tontolo iainana nandritra ny vanim-potoana Covid-19 tamin’ny taon-dasa. Araka ny fanadihadiana na­taon’ny oniversiten’i Hel­nsiki, nirongatra ny fandoroana ala tany amin’ny faritra arovana (AP) miisa 29 amin’ireo 123 nohadihadina, ny taona 2020, raha oharina ny taona 2019. Tena nanimba za­vamananaina maro tamin’izany ny enina amin’ireo. Maro koa ny mpanao trafika sokatra tratra tany Atsimo Andrefan’ny Nosy, teo anelanelan’ny volana avrily hatramin’ny jolay 2020. Tany Ambanja, nahatratra 200 ha ny velarana ala honko ripaka, ny volana mey 2020. Nitombo izaitsizy ny fanaovana saribao sy ny fikapana fahatany hazo. Tafakatra 123 ny fatana fanaovana saribao hita tany avaratra andrefan’i Mada­ga­si­kara, any amin’ny faritra arovana Bon­golava, ny mey 2020, raha 53 ny desambra 2019.Miisa 36 Faritra arovana tohanana Mitentina 10 453 858 118 Ar (2 735 722 dolara) ny famatsiam-bola avy amin’ny FAPBM, ho an’ny Rafitra misahana ny Faritra arovana eto Madagasikara (SAPM), amin’ity taona 2021 ity. Hoentina hampandehan-draharaha, hanatanterahana ny fampandrosoana eny ifotony sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho an’ny faritra arovana (AP) miisa 35 ity famatsiam-bola ity. Eo koa ny hanaovana vonjy taitra amin’ny tsindry mahazo ny AP. Hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpitantana ny AP vaovao. Manampy ireo ny fanatanterahana ny fandaharanasa fanonerana (Offset) any amin’ny AP iray, sy ny fanitarana ny Fari-dranomasina arovana (AMP) ao anatin’ilay tetikasa MPA-GEF 6, iarahana amin’ny Tahiry iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana sy ny AMP.Njaka A.L’article FAPBM : nirongatra ny fanimbana ala ny taona 2020 a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Betsiboka: mila manara-dalàna ny mpanjono
Mihena isan-taona ny trondro miakatra rehefa misokatra ny fotoam-panjonoana any amin’ny faritra Betsiboka tato anatin’ny 10 taona. Raha tany amin’ny taona 2010, nahatratra 1000 t ny trondro miakatra, tamin’ny 2020 lasa iny, latsaky ny 50 % izany no mbola madinika. Nanaitra sady nanentana ny mpiantsehatra rehetra ny sampandraharaham-paritry ny jono ao Betsiboka, hanaja ny lalàna amin’ny fampiasana harato. Hialana ny fampiasana harato tsy manara-dalàna, mandraoka trondro latsaky ny 7 cm.Tamin’ny 2020 ihany, niezaka hanarina izany ny sampandraharaham-paritra, nandrotsaka zana-trondro tilapia 19000 hitsinjovana ny ho avy. Entanina ny mpiantsehatra hanaja ny lalàna amin’ireo fitaovana fampiasany sy fanajana ny fotoam-panjonoana ihany koa. “Mandrora mitsilany ireo mpanjono tsy manaja izany, tsy misy fidiram-bola intsony ankehitriny. Ary izahay manara-maso manenjika ireo tsy manara-dalàna ireo sy mampihatra aminy ny sazy”, hoy ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny sampandraharaham-paritry ny jono ao Betsiboka. Misy fikambanana 24 sy kaoperativa iray any an-toerana ahitana mpanjono 1800. Mahatratra 525 km ny reniranon’i Betsiboka, mandalo an’i Madirovalo, Ambato-Boeny, Marovoay, Anjiajia. R.MathieuL’article Faritra Betsiboka: mila manara-dalàna ny mpanjono a été récupéré chez Newsmada.